Muxuu kiniinku ku fiican yahay? | Laga soo bilaabo Linux
Moodhadhku wuu ina qaataa oo wuu ina keenaa, teknolojiyadduna ma yaraanaynin. Marka hore waxay ahaayeen netbook, hadda ah Kiniiniga. Soo saare kastaa wuxuu ku dadaalay inuu soo saaro ugu yaraan hal nooc oo dheriyadan ah si aan gadaal looga tagin oo xitaa xilligan la joogo, ma aanan helin wax faa'iido ah ama iPad con macruufka, ama si Nexus 10 de Google con Android.
Waxay noqon kartaa in tareko noocan ah uu diiradda saarayo nooc adeegsade ah oo aan aniga ila mid ahayn. Maxaad u isticmaali lahayd kiniin? Daawashada fiidiyowyada, dhagayso muusigga, shir fiidiyoow ah ma la leedahay qof? Waxaan u arkaa inay tahay wax aan loo baahnayn in dheriga noocaas ah loo qaado wax aan waxtar lahayn.
Marka hore, maxaa yeelay iyagu kuma dhib badna inay isticmaalaan: Waa inaad ku qaadataa gacantaada, heerka indhaha iyo xagal aad suurtagal ka dhigi karto inaad ku qabato torticollis, maxaa yeelay haddii aad lugaha saarto, xanuunka qoorta ma u kaxee dhakhtar shiine ah.
Ta labaad, maxaa yeelay waddankayga, marka la eego duruufaha jira, suurtagal maaha in lagu socdo meel kasta oo ku xidhan a Wi-Fi, sidaa darteed 96% codsiyada ay ku jiraan aaladahaan, aniga ima shaqeeyaan. Si kor loogu qaado, waa naadir in lagu arko iyaga oo leh dekedda RJ-45.
Hadda waxaa soo baxday in Netbooks ayaa ka sii dhacaya Kiniiniga. Waayahay netbook way xoogaa culus tahay, laakiin ugu yaraan waxaan ku samayn karaa waxyaabo badan oo dheeri ah khadka tooska ah ama khadka toosan, mana aha intaas oo keliya, waxay badanaa haystaan ​​meel badan oo keyd ah iyo qalab aad u awood badan.
In kasta oo isbeddelka naqshadeynta websaydhku is beddelayo, oo bogagguna sii kordhayo la qabsiga, haddana weli waxa jira tiro badan oo ka mid ah oo aan ku habboonayn in lagu arko waxyaalahan farshaxan ee (kiniinnada) ah.
Sidaa darteed, aniga ahaan dhammaantood waa khasaaro. Si fiican ugama shaqeyn kartid si faahfaahsan barnaamijyada naqshadeynta, waxaanan qiyaasayaa in barnaamijyada leh kumbuyuutarka taabashada ay dhib tahay, markaa ... Muxuu kiniin ku fiican yahay? Fadlan, haddii qof ii sheegi karo, waan ku faraxsanahay .. 🙂
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » Muxuu kiniinku ku fiican yahay?
87 faallooyin, ka tag taada
Elav, curmudgeon jir xD !!! ...
Nano iyo Hugo waxay hore u xuseen dhawr waxyaalood ...
Tani waa sida shakhsiga ah sida weydiinta, Gnome ama KDE? Ubuntu ama Fedora? Jawaabta had iyo jeer waxay ku xirnaan doontaa cidda aad weydiiso ...
Tusaale ahaan Mexico, waxaa jira meelo badan oo kala duwan oo aad ku isticmaali karto isku xirnaanta Wi-Fi, sidoo kale shirkadaha taleefannada gacanta ayaa bixiya adeegsiga 3G, sidaa darteed waa suurtagal in lagu xirnaado meel kasta, waxaa jira dad badan oo "PRODUCTIVE" ah oo u baahan inay noqo 100% waqtiga iskuxiran, waa faaiido weyn inaad meel fog ka shaqeyso ...
Aragtidayda waxay leeyihiin faa'iidooyin badan iyo waxyeellooyin yar ...
Waxaan kuu xaqiijinayaa inay aad uga sahlan tahay inaad ku qaadatid dariiqa kiniin marka loo eego laptop-ka ... Waxaad u aqrisan kartaa si raaxo leh, waxaad ka daawan kartaa TALLAALADA fiidiyowga, adoo isticmaalaya meel aad ku xirto waxaad u beddeleysaa buug-gacmeed iyo habka ugu raaxada badan ee dukumiintiyada suurtagal, iyo wixii horeba loo sheegay ...
Marka la soo koobo, waa qayb ka mid ah geeddi-socodka dabiiciga ah ee la raacayo aaladahaan, waa arrin lala socodsiinayo dhinacyada teknoolojiyadda, qalabka aasaasiga ah iyo aaladaha jilicsan ayaa durba la rajaynayaa, awoodda wax-qabadku aad ayey u kordheysaa 5-ta sano ee soo socota = D Sikastaba, tani waa xaflad tiknoolaji ah oo aan istaageynin ...
Haddii shaqooyinka loo yaqaan 'steve works' ay ku yiraahdaan waa inaad mid leedahay, hadda waxay dhab ahaan u baahan yihiin inay waqti lumiyaan ama naftaada ku maaweeliyaan safar.
Waxaan u sheegi lahaa Mudane Jobs (nabadgelyo maya nasasho) inay aad u fiicnaan doonto in aaladuhu u adeegaan waqti lumis mararka qaarkood, laakiin taasi qiil uma noqonayso in lagu beddelo qashin sugitaan sanado ah si ay u kobciyaan oo ay u horumariyaan waxqabadkooda illaa aan ka helno wixii aan horey u haysannay. Sababtoo ah haddii qof uu doonayo wanaagga kaniiniga ka dib iibso mid fiican laptop la beddeli karo, taas oo ah isbeddel sii kordheysa oo isdaba-joog ah tan iyo markii uusan noqon lahayn qalab cusub oo lumiya shaqeynta sababo la xiriira kuwa kale oo wax ku ool ah laakiin wax soo saar yar, laakiin mid ka mid ah oo ku daraya astaamahan cusub kuwa aan waligeen haysannay, sidaasna lagu ilaalinayo qalab dhammaystiran oo badan. .
Hagaag, waxaan jecelahay inaan wax akhriyo, ku sameynta kumbuyuutarka ama shaashadda netbook waa xanuun iyo raaxo daran. Sidoo kale samee howlaha maamulka goobta (laga bilaabo Linux) oo raadso casharro oo iskuday, taasi waa waxa ay aniga ii shaqeyso, in wax laga qabto fadhiga ama sariirta, arintu waxay tahay aniga ma bixin karo xD
Waxaan u maleynayaa inay labaduba sax yihiin, marka loo eego kiniiniyada, ma dhihi kartid wanaag oo dhan, ama xumaan oo dhan.
Anigu waxaan ahay macallin oo dhexdeeda ayaan ku maamulaa baloogyadayda (1 fasalkiiba 4), emayllada (1 shaqo, 1 Tacliin iyo 1 shaqsiyeed) kalandarka (3 isku mid ah), waxaan dib u eegaa baloogyada sida aadka ah ii daneeya (12), I akhri buugaagta Kant, Nietzsche, Focaul, sayniska, farshaxanka, nashqadeynta iyo suuqgeynta, waxaan daawadaa filin marba marka ka dambeysa oo maalinta ay cuslaato aan ciyaaro dhowr daqiiqo si aan waqtiga u dilo. Waxaan hayaa galaxi tab 2 markaa qeexitaanku waa hd buuxa. Anigana waxaan rakibay Ubuntu in yar ka hor laakiin kuma ordo 100 sidaa darteed waxaan haystaa Android 4.0
Sikastaba, waa mid wax soo saar leh, dabcan ma ahan heerka My Thinkpad t410 oo leh core i5, 8 gb ee Hiperx ram, iyo ubuntu gnome remix. halkaasoo aan ku sameeyo sawir iyo 3d iyo naqshad muuqaal ah. Laakiin fikirkayga fekerkiisu waa 2 kg dhabarkayguna mar hore ayuu dalbanayaa nasasho. Waxaan fiirinayaa ultrabook inkasta oo aanan u arag faraq badan mooyee culeyska mooyee. Buug-gacmeedka xitaa ma lahayn Acer 1410 oo leh laba-koronto oo la dardargeliyay iyo waxa liita ayaa la yaabay ka dib markii dhowr daqiiqo la siiyay.
si loo rakibo debian 😛
Gebi ahaanba waan oggolahay, waxaan maqlaa markasta in iPad-ka uu ugu fiican yahay, laakiin ma fahmin waxa ugu fiican maxaa? Shakhsi ahaan, waxay u yihiin, sida ay dhahaan dalkayga, oo ay halkaa "laalaad" ku laalaadaan, runti kama shaqeyn kartid iyaga, si aad u daawato fiidiyowyada waxaan door bidaa kormeere weyn, haddii aan la sheekaysanayo (oo fiiri, haddii Waan daahay la sheekaysiga) Waxaan door bidaa kumbuyuutar dhammeystiran oo JIRSIYO ah, iyo in aan barnaamij ka sameeyo JA!
Waxay u adeegaan oo kaliya inay dadka ka sii nixiyaan, iyagu waa qashinka mustaqbalka, inay isticmaalaan oo iska tuuraan maxaa yeelay sannad kasta waxay ka tagaan zillion kun oo ka wanaagsan kuwii hore
ajjaajajaj ka sii fiican xD
min Cuba ka kalena to. in dib loo iibiyo XD
Hahahaha .. Qiso Dhab ah
Gabi ahaanba ku raacsanahay maqaalka. In la yara wareego in muddo ah way fiicantahay laakiin ma mudna in la qaato qalab noocaas ah si loogu siiyo isticmaalka aaladda casriga ah.
Hagaag, kaniinigu wuxuu noqon karaa mid "waxtar badan" u leh: ku ciyaarida shimbiraha careysan, siinta geek, daawashada xaqiiqda la kordhiyay, iwm. Maaddaama ay u muuqdaan inay yihiin kuwo aan wax soo saar lahayn oo ka raqiisan kombuyuutarka, taasi waa suurtagalnimada sababta qof kastaa u doonayo mid hadda, hehe.
Si fiican u hadal si dhab ah, kiniiniyada iyo qaar ka mid ah taleefannada gacanta (hadda ugu weyn) waxay noqdeen kuwo aad u awood badan oo sameeya wax kasta oo lagu samayn karo kombuyuutar, waana sahlan tahay (ka dib oo dhan, caarada farta ayaa ah aalad aad u fudud oo dabiici ah loo isticmaalo in ka badan jiir). Hooyaday waxay haysataa Ipad waana ku faraxsanahay iyada oo waliba ay haysato laptop (oo ay dhib badan ka haysato mar dambe). Laakiin haye, ma barnaamij ama wax ma qorto, waxay kaliya u isticmaashaa ipad-keeda si ay u socoto, u daawato fiidyowyada YouTube iyo wixii la mid ah, dhageyso muusigga, hubiso emaylka, ciyaar ciyaar, hubiso khariidad iyo marmar warqad qorto ama foom buuxiso, iyo Dhammaan waxyaalahan kiniiniga ayaa ku filan oo badan, gaar ahaan haddii isticmaalaha uu ku nool yahay aag leh caymiska Wi-Fi. Dabcan, faa'iidada ugu weyn ee kombuyuutarka waa mid la qaadan karo.
Laakiin isticmaalaha sideena oo kale ah, kaniinigu sidoo kale wuxuu faa'iido u yeelan karaa inuu yahay madal horumarineed. Haddii ay la socdaan Android ama iOS, waxaa jira goob weyn oo loogu talagalay horumarinta codsiyada mobilada iyo kiniiniyada, iyo xagga aragtida farsamada, ugu yaraan waxay ii noqon laheyd mid aad u xiiso badan aniga inaan awood u yeesho inaan tijaabiyo waxyaabaha sida OpenGL ES, iwm.
Si fudud ayey u tahay maadaama taleefannada gacanta, taleefannada casriga ahi ay si wanaagsan u socdeen, Apple wuxuu go'aansaday inuu wax ka dhex helo laptop iyo taleefanka gacanta, iyo maadaama Android aysan ka yaraan karin maxaa yeelay shirkadaha la shaqeeya Android ayaa la baxay, horeyna qof walba wuxuu u doonayay mid.
Iyo kuweena barnaamijka u sameeya android ka dhib badan maxaa yeelay waa inaan ka dhignaa mid ku fiican taleefannada gacanta isla mar ahaantaana kiniiniyada waana ka xanaaq badan tahay, S3-keygu waa igu filan yahay waana haystaa wax badan, moobilku wax walba wuu leeyahay kiniin ah ayaa leh, xitaa waad ku xidhi kartaa moobilka kormeeraha oo waxaad u isticmaali kartaa processor ahaan http://www.youtube.com/watch?v=9nh2NSLgaII&feature=player_embedded
Khasab maahan inay wax xun tahay in kiniin la yeesho waxay kaa dhigeysaa wax aan faa'iido lahayn oo ay xambaarsan tahay xayeysiinta, ama "mood geek", ama wax la mid ah ...
Waxay i siiyeen kiniin asal ahaan Shiinees ah oo wata Android, kaas oo qiimahiisu yahay 20 jeer wax ka yar wax soo saar kasta oo asal ah: D, waa tan ugu fiican ee aan akhriyo, ha noqoto buugaag, ama manga, ama qabashada qormada, waxaan jeclahay inaan qoro sidoo kale, iyo buugaagta ay keento ayaa ka badan inta ku filan, ka dib waxaan ku tuuraa kombuyuutarkayga waana intaas.
Waxaan akhriyay buugaag badan tan iyo markii aan haysto kiniinkan (maxaa yeelay xaqiiqadu waxay tahay ma haysto lacag aan ku iibsado buugaagta qaab ahaan iyo maktabada maktabaddaydu waa @ # !? &), waxaan u dhaafay uun heesaha qaarkood markaan akhriyayo, iyo fiidiyowyada, maxaa yeelay ma jecli inaan fiidyowyo ugu soo raro aaladahaan (taleefannada gacanta, kiniiniyada, iwm)
Runtu waxay tahay haddii aad u isticmaali doontid inaad ku ciyaartid shimbiraha careysan (sida aan u necbahay ciyaarta yar ee moodada leh) markaa hambalyo, waxaad sameysay iibsi caqli badan (cod macaan). oo way fiicantahay hadday ipad tahay (waan necbahay tufaaxa: D) waxaad ka mid tahay kuwa badan oo ah qof ku fiican kaniini haha ​​hahahahaha
Tilmaam loogu talagalay neceb shimbiraha neceb, sida helena_ryu [xanaaqa xun]:
Waqti ka hor waxaan aasaasayay buugiisa yar ee loo yaqaan 'Blackberry PlayBook' oo deriska ah oo dabaqa hoose ah waxaanan ka helay ciyaar yar oo aad u xiiso badan isticmaalka 'gyro / accelerometer', waxaa la odhan jiray sanduuqyo ama wax la mid ah, waxayna ka koobnayd in sanduuqyada qaarkood la dhex dhigo sax meesha ku tiirsan culeyska
Runtu waxay tahay, haddii aan suurtagal ahaan lahaa, waxaan iibsan lahaa kaniiniga Shiinaha sidoo kale, waxaa jira meelo sida http://www.hongkongeek.com kuwaas oo ku siiya iyaga qiimo aad u jaban.
Shirkaddii ugu dambeysay ee aan ka shaqeeyey, iibiyeyaashu waxay leeyihiin ipad, halkaas ayey ku hayaan fiidiyowyada alaabada, liisaska qiimaha, waxayna ku xirmaan keydka macluumaadka wixii la bixiyo, waxay ka doorbidaan laptop ama netbook.
Shakhsiyan waxaan doorbidaa laptop-ka, dan kama lihi culeyskiisa ama cabirkiisa.
Sida lagu sheegay faallooyinkii hore, aniga waxay ila tahay in mid ka mid ah waxyaabaha runta loo adeegsado ay tahay wax aqrinta, gaar ahaan haddii ay tahay inaad ka gudubto hal meel oo aad u baahato meel walbana waa inaad sugtaa waqti dheer. Waa waxa kaliya ee aan ku iibsan lahaa.
Ka aqriso shaashadda gadaal u ifaysa? Maya mahadsanid. Waan ku faraxsanahay Kindle-kayga: kayar, ka raqiisan, khad dareere ah, baytarigu wuu sii dheeraanayaa (dhowr toddobaad) wuuna fududahay.
Kiniiniga waa A: mobilo waaweyn; B: netbook aan lahayn kumbuyuutar Taasi waa in la yiraahdo: xaaladdu si kastaba ha noqotee, qalab aan faa'iido lahayn oo yar.
Iyo xitaa intaa ka sii badan haddii ay tahay Ipad lagu xiray qiimo aad u sarreeya.
Ku jawaab Krim
Hagaag ... aniga waxba iima jiraan sida furitaanka buugga, oo la doorbidayo mid cusub iyo soo qabashada urtaas gaarka ah, "saxiixa" ee buugga. Aniga ahaan waa wax aan fiicneyn in laga akhriyo kiniinka, laakiin sidoo kale aaladda kale. Maaddaama ay tahay awoodo xaddidan, midna ficil ahaan waxba ma qaban karo, oo haddii qofku rakibo codsi tusaale ahaan Blender, waxaa lagu duubayaa gelinta. Si aad shaqo u qabato, maya, maxaa yeelay waxay la mid tahay la shaqeynta taleefannada casriga ah, oo aan raaxo lahayn. Dhageysiga muusikada ... taasna waxaa jira aalado yar yar oo wax ku ool ah, si aad u daawato fiidiyowyada, sidoo kale. Inta badan waxa loo adeegsan karo waa bandhigyo iyo bandhigyo isdaba-joog ah, si macluumaadka loogu hayo gacanta, laakiin marka laga reebo taas, waxaan si buuxda ugu raacsanahay elav.
Waxaan ka tagay buugaag sanado kahor waxaan bilaabay isticmaalka aaladda iyo ipad-kayga ayaa iga farxiya, indhahaygu ma daalaan haba yaraatee, badanaa waxbadan ayaan aqriyaa habeenkii anigoo sariirta jiifa.
Waxay i siiyeen Nexus 7 waxaanan ugu isticmaalaa barnaamijka. Soo-saare kasta oo Android ah waxaan kula talinayaa isticmaalka kiniin. Haddii aysan ahayn shaqadayda, kiniinka waxaa loo isticmaali karaa in lagu ciyaaro guriga aqrinta qodobbada internetka (waxaan hayaa buug elektaroonig ah si aan u akhriyo buug) ama in aan geeyo qof gurigiisa si aan wax u baro. Anigoo ah saynisyahan kumbuyuutar waxaan waligeyba doorbidi jiray laptop-ka, laakiin waa run in shaqooyinka qaarkood ay u fududahay uguna dhaqso badan tahay in la isticmaalo kiniin.
Kiniinku waa wax aadan u baahnayn illaa aad mid ka tijaabiso (in kasta oo ay weli tahay sidii aan loo baahnayn).
Jawaab JuanMa Jurado
Oo xiiso leh. Weligay ma maqal qof barnaamij ku sameeya kiniin. Marka laga reebo inaad ka dhigeyso mid raaxo leh, waxaad ku sameysaa qaabka 'XD'.
Waan ka xumahay, waxaan sharxay XD waxaan ula jeeday inaan u adeegsado inaan ku tijaabiyo barnaamijyada. Ma doonayo inaan tilmaamo cilladaha emulator-ka Android ee Linux. Si aan wax u barto Waxaan u isticmaalaa laptop-ka Fedora 17. Suuragal ma ahan in kiniin wax lagu qoro.
Kiniiniga wuxuu iila muuqdaa taleefan aan wicitaan lahayn iyo pc daboolan.
Aniga ahaan wax waxtar leh waxay noqon laheyd taleefan ay kujiraan shaqooyin kiniin ah, wax lamid ah sida galaxy note, markaan weynaado waxaan iibsan doonaa XD.
Si aad isu muujiso oo aad lacag u tuurto.
Dhibaatadu ma ahan kiniinnada, laakiin waa isticmaalka ay tan u leeyihiin
gebi ahaanba waan oggolahay, waxaan wax ka bartaa jaamacadda, waan shaqeeyaa, sidoo kale waxaan ahay aabe, oo i aamin in aan runtii ka helo kaniinigayga. U-ga, wuxuu iga caawiyaa inaan si joogto ah ula socodsiiyo waraaqahayga, qoraallana qaato oo aan qaato dukumintigeyga, haddii ay yihiin shaqo ama qalab wax lagu barto, xitaa intaas in ka badan way i caawisaa inta aan ku jiro safarka Jaamacadda, maxaa yeelay way ka badan tahay ama ka yar tahay 1 saac iyo badh socdaal ah, iyo igu filan inaad ii adeegtay si aan u hormariyo buugaagta iyo walxaha tijaabooyinka. Asal ahaan waa isku mid shaqada, laakiin waxaa diirada la saaray waqtiga dilka daqiiqadahaaga bilaa camalka ah marka aysan jirin wax la qabto, aragti ahaan ... xD, si aad u baalaliso, u isticmaasho emailkeyga oo aad ula noolaato dadkeyga. Ugu dambeyntiina, aabe ahaan, waxaan la imaan karaa muusigga iyo fiidiyowyada ay gabadhaydu jeceshahay, oo ay weheliso waxay aadi kartaa YouTube, tusaale ahaan, iyo inay joojiso fuck on safarada haha. Waxaas oo dhan, dabcan, kiniinkeyga oo leh 3g iyo qorshihiisa billaha ah ee ISP-ga ah. Salaan sxb.
Waxaan ula jaan qaadayaa qoraaga maqaalka, waan ku faraxsanahay inaan ogaado inaan kaligay ahayn kan aanan arkin waxa aniga ii ah.
Kuwa idinka mid ah ee u adeegsada inay wax akhriyaan waxaan kugula talin lahaa inaadan sameynin, shaashad gadaal u iftiimaya indhaha ayaa ka gubanaya.
Taas aawadeed shidan oo leh shaashad khad elektiroonig ah oo aan lahayn iftiin dambe.
Ku jawaab paltonov
Tan iyo markii aan iibsaday kiniinkeyga, waxaan bilaabay inaan ku fuliyo inta badan howlaheyga, laga bilaabo inaan ka helo dhaqdhaqaaq shabakadeyda bulshada ilaa howlaha wax soo saarka (cilmi baarista, qaabeynta iyo falanqaynta nidaamyada). Anigu waxaan ahay horumariyaha Nidaamyada waxayna igu adeegtay marxaladda falanqaynta iyo qaabeynta. Codsiyada sida Dropbox ama google drive, waxaan hayaa dhammaan faylalka muhiimka ah ee aan gacanta ku hayo sida PDF, xafiiska otomaatiga, sawirrada, buugaagta, buugaagta, iwm. Waan la tashanayaa iyaga wakhti kasta, waxaa jira codsiyo aan dhammaad lahayn. Waxaa jira codsiyo ka caawiya kicinta ilmahayga, waa wax aan caadi ahayn. Waxaa laga yaabaa inaanan wali 100% badali karin laptop-kayga, maxaa yeelay barnaamijyada iyo horumarku way ka dhib badan yihiin, laakiin dhamaan howlaha shaqsiyeed waxaan ku qaban karaa 100% kaniiniga, howlahayga xirfadeed waxaan ku sameeyaa 50% kaniinka. Waa waayo-aragnimadayda
Jawaab Steve Harris
Weli waxaan si gaar ah ugu siiyaa gaadiidka, laptop-ka waxaan ka soo saaraa oo keliya markaan xafiiska imaado
Anigu ma bixin doono lacagta la midka ah ee ay ku kacayaan in waqtiga la dhaafiyo intaan been sheegayo ... oo sida kor ku xusan, waxaa jira waxyaabo ka fiican oo la akhriyo, sababtuna tahay khad elektaroonig ah ayaa jira.
Xidhiidhka ka dhexeeya qiimaheeda iyo isticmaalkeedu aniga iguma habboona, oo aan ku xuso in aanan jeclayn nidaamyadeeda hawlgalka (iOS, Windows iyo Android).
In kasta oo mabda 'ahaan aan ku raacsanahay Elav, haddana waxaan u maleynayaa in Nano uu qodob fiican ka dhigayo. Waxaan u maleynayaa in Tablet-ka uu yahay kordhinta PC ama Laptop (hada) oo uu fududeeyo ama fududeeyo, la tashiga, cilmi baarista, soo bandhigida iyo gudbinta macluumaadka.
Shakhsiyan, Tablet-ka aniga waxba iima tarayo ilaa iyo inta aysan haysan awood laptop ama xitaa Netbook, runtu waa uun hal shay.
Waxaan u arkaa inay tahay wargeys cusbooneysiin ah. Ma jecli inaan wax ku akhristo pc-kayga, waxaan u arkaa mid aad u culus marka la barbar dhigo buug ama joornaal.
Dhanka kale, waxyaalahaasi ma cusla, adeegsi kale ma heli karo, sidoo kalena ciyaaraha psp ma socdaan. Isticmaal blender, pffff waxaad ku wada jebineysaa aaladda gacmaha gubasho.
Akhriso rss iyo sheeko kale, maxaa yeelay xitaa fiidiyowyadu sifiican uma socdaan haha ​​(laptop-ka saaxiibkay).
Wixii aan ka arko, waxaad ku rakibi kartaa Linux sida debian ama nidaamyo kale.
Qodobka ugu muhiimsan, waxay ku kacayaan kharash aad u badan wixii ay qaban karaan. Waxaan sifiican uga iibsanayaa laptop aniga oo leh ilo fiican (haddii ay tahay xagga la qaadan karo).
Sababta wanaagsan ayaa ah inay yihiin soojiidasho dumarka;).
Nah, runtu waxay tahay, aad baan u isticmaalaa, gaar ahaan kulleejada waxaanan sidoo kale tuuraa taxanaheyga, buugaagta, gacmo-gacmeedyada, rs-yada, Boostada waxaanan had iyo jeer sitaa shandad dhab ah si uusan culeys ii saarin xP
Shakhsiyan, isticmaalka aan kaniiniga u siiyaa waa inaan internetka dul maro markaan sariirta jiifo, ama aan akhriyo ebook-yada, waa wax aad u fiican XD
Aniga aragtidayda, kiniiniyada waxaa cad inay yihiin dadka cuna waxyaabaha halkii ay soo saari lahaayeen. Cidna uma qarsoona cidna in barnaamij ka sameysma kaniiniga uu noqon doono hawl aan wax soo saar lahayn 100% Dhinaca kale, kiniiniyada waxay ila yihiin kuwo ku habboon aniga si dadka aan waxba ka aqoon kombiyuutarka ay ugu soo dhowaadaan adduunkan. Dhamaanteen waa wax iska caadi ah in jiirka la dhaqaajiyo oo falaarta yar ee shaashaduna ay dhaqaaqdo, laakiin qofka aan ku tababbarin kumbuyuutarka tani uma muuqato. Tusaale kale ayaa ah sida aan ugu dhaqaaqno dukumiintiyada ama bogagga shabakadda, waxaan dhahnaa waxaan hoos ugu dhigeynaa bogga duubista jiirka laakiin markaan rabo inaan aabbahay ku tuso waxyaabo internet-ka ah wuxuu ii sheegayaa inaan furo bogga si aan waxbadan u akhriyo, iyo inkasta oo waxay ila tahay wax la yaab leh aniga, waxa uu sheegayo waa sax boggu kor ayuu u kacayaa oo kaliya si aan ula qabsano inaan dhahno waxay ku sii socotaa dhaqdhaqaaqa jiirka iyo kan kiniiniga ah hadii uu doonayo inuu waxbadan aqriyo wuxuu u kacayaa bogga hadduu ku samayn lahaa go'yaal jireed. Marka la soo koobo, waxaan u maleynayaa mudnaanta kiniiniyada inay tahay in dadka la isugu soo dhoweeyo ilaha hadda la heli karo lana xusuusiyo in aaladaha ay tahay in nalala jaanqaado ee aan annaga nala mid ahayn.
Ku jawaab raerpo
"Kiniiniyada waxaa iska cad inay yihiin dadka cuna waxyaabaha halkii ay ka soo saari lahaayeen"
WTF waxaad ku keentay khalkhal guud sida aan ugu akhristo kumbuyuutarka. Waan wareersanahay markaan aqriyay intaas kadib. Waan ogahay inaan hoos u dhacayo, laakiin isla waqtigaas waxaan dareemayaa inuu boggu kor u kacayo. Waa cabsi.
Saas ma aha, waxay u adeegaan inay eegaan dhammaan sheekooyinka shimbiraha xanaaqa.
Si dhab ah u hadlaya, waxaan u maleynayaa in wixii markii hore loo yaqaan kiniin ahaan ay u egtahay inay u egtahay waxa Microsoft microface (ama wax kasta oo loo yaqaan), waxaan u soconeynaa isla wixii aan ku aragnay kiniiniyada Android ama ipad , iyadoo la tixgelinayo inay ku dartay dekedda USB, suurtagalnimada in si toos ah loogu xiro kormeeraha dibadda iyada oo aan la soo saarin adapters-ka (sida kiniinno badan oo Shiineys ah) iyo cpu hufan oo awood u leh in lagu socodsiiyo barnaamijyada desktop, iyadoo lagu guuleysanayo ipad, Apple waxay ku badashay aragtidaas adeegsadayaasha badan, noqoshada 'heerka' ama xarunta tixraaca, abuurista badeecad si aad ah u shaqeyneysa oo kaliya in la iswaafajiyo feylashaada fara badan ee kombiyuutarka, la isticmaal, aqri wararka boggaga aad jeceshahay iyo awood u yeelan karno inaan dhajinno mar walba ... si fiican, waxa aan maanta aragno; Taleefannada casriga ah ee waaweyn ayaa la jarjarey si looga hortago wicitaannada.
Waan ka xumahay maqnaanshaha ttildes-ka iyo n ~ EN ~ E, kiiboodhku waa Ingiriis.
Salaan .. Kiiboodhka Ingiriisiga waxaan u adeegsadaa noocyada kala duwan ee Ingiriisiga furayaasha dhintay .. waxaana ku dhejiyey ñ isku darka Alt + N 🙂
Akhriska majaajillooyinka ayaa qumman!
ha ahaato qaab pdf, cbr iyo qaab cbz, ama webcomics
Waxaan sidoo kale u isticmaalaa inaan ku sameeyo sawir gacmeedyo leh buugga 'Sketch book pro' waxaanan ugu gudbiyaa kombuyuutarkayga oo waxaan ugu midabeeyaa gimp
marka lagu daro daalacashada internetka iyo waxyaabo horeyba halkaan loo dhigay, laakiin sidii ay u qaabeeyeen, waxay kuxirantahay baahida isticmaalaha
uma baahnid inaad midna xoog ku iibsato
Waxaan hayaa kombiyuutar desktop ah iyo laptop. Kaliya waxaan shidaa laptop-ka hal mar 3-4 dii biloodba mar.
O_O Waa marka ay sheegaan waxa soo baxa: Eebbe gadh buu siiyaa kuwa aan daanka lahayn .. Waxaan halkan ugu waalanahay inaan haysto laptop waxaadna haysataa mid aad isticmaasho 3dii ama 4tii bilood ee kasta xDDD
Halkan Spain, uguyaraan waa Ipad, maahan magnet dumarka, maxaa dhacaya hadii, kiniiniyadaasi ay yihiin aalado fudud oo loogu talagalay macaamiisha ka kooban waxyaabaha maqalka ah ..., inta soo hartay, waxaan doorbidayaa buugaagta casriga ah.
Guatemala, kiniin android ah ayaa la sameeyay oo lahaa dhowr galgacnac oo 2 ka mid ah waxay u ahaayeen jiir iyo kiiboodh kan la socda kiniinka, taas oo ah, waxay ahayd netbook haddii aad rabto aad u isticmaali kartid sida kaniiniga ama netbook iyo sida toos ugu dhex jirta shandada Markii aad furaysay shandada waxaad horey u haysatay shabaqa hadii aadan rabin inaad isticmaasho jiir ama kumbuyuutar, kaliya waad kala furaysay iyaga, habka kumbuyuutarka uu u haystay suufkiisa si uu u dhaqaajiyo fallaarta marka lagu daro inaad awood u lahaan karto jiir caadi ah ama laptop. Xaqiiqdii, hal maalin ugu yaraan waxay labanlaabaan awooddooda xagga qalabka, anigu mid baan iibsadaa, laakiin xilligan la joogo.
Inta soo hartay, waxaan si buuxda ugu raacsanahay Elav iyo asxaabta qaar, waa uun shay cufan.
2 sano ka hor, kiniinigii ugu horreeyay / netbook ayaa halkan lagu sameeyay
halkan waa ilo kale oo dhow:
Anigu waxaan ahay mid ka mid ah kuwii iibsaday Netbook kii ugu horreeyay. Aniguna goor dhaw ayaan niyad jabay. Waxaan marwalba doonayay qalab sameeya howlaha aasaasiga ah sida aqrinta boostada, aqrinta PDF, hubinta jadwalka, qorista, la tashiga keydka macluumaadka, wax ka eegida internetka, iwm. adiga oo aan shidan PC-ga oo si raaxo leh ugu fadhiya kursiga kuraasta. Taasi waa in la yiraahdo, waxba uma baahna awood koox weyn iyo xoog saarista dhinacayga (sida tafatirka fiidiyow ama sawir). Waxaan u maleynayay in Netbook uu oggolaan doono, laakiin waxyaabaha qaarkood ma aheyn wax raaxo leh. Kiniiniyada ayaa ka dhigaya cilladaha Netbooks, ugu yaraan isticmaalka aan u maleynayo. Laakiin shaki ayaa iga jira; asal ahaan in kuwa wanaagsan ay kugu qasbaan inaad ka shaqeysid daruuraha, wax aanan iga aheyn wax aad u qosol badan, taas oo inta badan ku lug leh baahida xiriir wanaagsan, taas oo ah, lacag badan.
Laakiin si kastaba ha noqotee, waxaan u arkaa inay aad u faa'iido badan yihiin inaan u isticmaalo kombuyuutar deg deg ah, marwalba la heli karo oo sida muuqata mustaqbal weyn leh.
Waxaan u arkaa mustaqbalkayga sidan oo kale (waxaan ka fakarayaa isticmaalkayga, bey'ada iyo isticmaalka ugu yar): laptop sida kombiyuutar shaqsiyeed (kuwa hada jira midkoodna awalba awood buu u leeyahay inuu wax walba sameeyo), kiniin maalinba maalinta ka dambaysa iyo maaraynta dhijitaalkaaga nolosha (in kasta oo taleefanka gacantu sidoo kale u qalmo) iyo miniPC, oo ku xidhan TV-ga, si loo soo dejiyo iyo TV-ga. Si kale haddii loo dhigo, "munaaraddu" waxay isu huraysaa dhaqdhaqaaq iyo keyd / acology.
Waxaan jecelahay inaan u arko kiniin sida wax ka waxtar badan kana awood badan eReader, oo leh astaamo la mid ah netBook (xitaa ka sarreeya sida uu yahay kiiska shaashadda, baaxad ahaan iyo xallin ahaanba) iyo is-dhexgal aad u sarreeya waqtigan. Ernesto, Cuba maahan halbeeg lagu iibiyo suuqa adduunka. Dunida inteeda kale, waxaa jira WiFi bilaash ah iyo "nooca dadweynaha" oo adeegsada aaladahaan.
Kulayl ma kululaanayaan, baytarigu wuxuu socdaa saacado badan, waayo-aragnimada adeegsaduna way fiican tahay.
Sikastaba, taasi kama sareyso liistadeyda ahmiyadaha / isdabamarinta, laakiin in lagu daro, waa xaqiiqo.
Dabcan Willians laakiin waxaan u maleynayaa sida aan u noolahay (nasiib daro) oo aan u isticmaali karo kaniiniga (madadaalo, iyo wixii la mid ah) markii aan horey u haystay PC, Laptop .. laakiin midkoodna labadan ka hor intaan la soo sheegin .. Maxaan u doonayaa? Maaha in la dhaho guud ahaan, awoodeeda keydinta ayaa waxbadan ka yar netbook, tusaale ahaan.
BTW. Hadday fikraddu ahayd inaad si xun uga hadasho Shaqooyinka, waxay ku habboon tahay sawirka iPad-ka ee jeldiga ku yaal. Haddii kale, waxaan u maleynayaa in sawirka kiniiniga Android uu ka sii badnaan lahaa barta blog-ka.
Fikraddu waa in laga hadlo Kiniinka, waana hagaag, waan hubaa in qof kasta oo aad wax ka weydiiso mid, waxa ugu horreeya ee ay ka fikiri doonaan uu yahay iPad. 😉
Waa hagaag waxay kuxirantahay isticmaalka la siinayo, tusaale ahaan waxaan leeyahay isbarasho wiil autistic ah oo aada iskuul gaar ah oo ay la wadaagaan mid ka mid ah caruurtayda (isaguna waa autistic), xaqiiqadu waxay tahay in isbarashadaasi ay iibsatay Ipad oo ku rakibay codsiyo halkan laga soo diyaariyay oo Japan ah waxaanan kuu markhaati kici karaa in wiilka ay is yaqaanaan uu si dhakhso leh ugu socday xagga barashada iyo la qabsiga si hadhow loogu gudbiyo iskuul caadi ah, si "qashinku" "taasi waxay ahayd mid waxtar leh.
Sidii aan horayba u sheegay, waxay kuxirantahay isticmaalka la siinayo.
Waxaan ka bilaabayaa fikradda ah ma jecli inaan shaashad ku akhriyo buug, kaliya waxyaabaha kooban sida maqaallada, HowTo, casharrada ... Ma haysto Wi-Fi oo gees walba ah, iyo Internet aad uga yar, sidaa darteed ma hubin karo xitaa warqadda, Mana aha wax isku mid ah.
In la ciyaaro? Waxay noqon kartaa, laakiin uma hurinayo wax ka badan nus saac ciyaarta, marka laga reebo markaan Arenoso ku toogto OpenArena xDD.
Waxyaabo badan oo ganacsi sida soo bandhigid, si aan u muujiyo wax soo saar, waxaan u arkaa inay ka faa'iido badan tahay, laakiin ma aha beertayda iyo adduunkaba. Ma arko hab raaxo leh oo aan ku daawado fiidiyoow sariirta, sidaas oo kale: waa la tuuray.
Laakiin waan sii dheereynaynaa, qiimayaasha .. Haddii aan ku iibsan lahaa iPad-ka waxa ku kacaya, waxaan rajeynayaa inay ii karineyso, dharkeyga bir ka dhigi doonto oo xitaa dhaqi doonto .. fadlan.
Waa sababahan awgood aniga oo aan u arkin wax aan u adeegsan karo shaygeyga la midka ah .. 😀
Waxaan haystaa Acer Iconia A500 waxaanan ugu isticmaalaa sida saxda waxa nano yidhaa. Waxaan u adeegsadaa PC desktop-ka waxyaabaha aanan ku qaban karin kaniiniga, buuga xusuusta waxaan u isticmaalaa kaliya waxyaabaha kuleejka ah (inaan tago).
Madadaalo iyo cunno kuxirnaan leh oo si raaxo leh uga socota meel kasta iyo madax-bannaanid aad uga badan buugga xusuusta, kiniinka. Uguyaraan aniga waxbadan ayey iila muuqataa 🙂
Marwalba waan jeclaa kiniin, laakiin waa kaliya haddii aan ku dul ridi karo Linux, ilaa vivaldi iyo wixii la mid ah ay ka soo baxaan, wax ku habboon jeebkeyga
Looma adeegsado NADAAAA oo kaliya inay lacag ka helaan "cholulos" -da jecel inay ku faanaan wararka teknolojiyadda. Waxaan hayaa buug xusuus qor ah.
Mudane Geronimo, faallooyinka sida kuwaaga oo kale u fiiqan iyo wixii la mid ah ayaa runtii ah tan kobcineysa tan, boggeena (maqnaanshaha weyn ee iyaga ka mid ah, ha rumaysan).
Kala duwanaanta adeegsiga tiknoolajiyada maanta la sameeyay, waxay sababtaa in xulashooyinka kala duwan ee aan haysanno, ay leeyihiin qol kuxiran isticmaalaha ugu dambeeya ee iyaga cuna.
Xaaladdayda gaarka ah, waxaan haystaa pc desktop iyo kiniin.
Xaaskeygu waa isticmaale waqti-buuxa ah kaniiniga, tan iyo markii ay u isticmaasho inay ku hesho macluumaadka iyo xilliga firaaqada, waxay dhageysataa raadiyaha, ururinta muusiggeeda, waxay aqrisaa boostada, waxay eegtaa waxyaabaha ka jira internetka, iyo goorta carruurta xoogaa ayey joojiyaan, buug akhriyaan ama filim daawadaan. Waxaas oo dhan oo leh xorriyadda dhaqdhaqaaqa oo aad u sarreeya, iyada oo aan culeys la saarin, waxay ku habboon tahay in la daawado habka cuntada loo karinayo inta wax la karinayo, inta la dhageysanayo muusigga, iyo in la daawado filim inta feylasha laga hadlayo, iyada oo aan laga yeelin meesha TV-ga ku yaal. Waxaan ula jeedaa, dhammaan faa'iidooyinka loo maleynayo in pc ama notebok ay ku leeyihiin kiniinka, maxaa yeelay waa khasaaro.
Carruurtaydu waxay wadaagaan waqtigooda, badh iyo badh, waxay ku ciyaaraan waxyaabo kombuyuutarka ah kuwa kalena kiniinka, filimada iyo internetka, had iyo goorna kiniinka ayay ku qaataan, iyaga oo isdiiwaangeliya markay wax baranayaan, kaniiniga, shaqada xafiiska ama sawirro, kumbuyuutarka
Xaaladdayda, waxaan isticmaalaa pc 95% waqtiga, uma baahni dhaqdhaqaaq wax alla wixii, mana xiiseeyo, wixii aan sameeyo, waxaan u baahanahay awoodda pc, shaashadeeda.
Hagaag, sida aad arki karto, waxaan u maleynayaa inay leeyihiin sabab macquul ah oo macquul ahaansho, inkasta oo shaqsiyan aanan u isticmaalin haba yaraatee.
Maxaa kiniin ah:
Haddii aan joogo meel kasta oo aan ka horreyn mishiinka, tusaale ahaan barxadda barxadda, ka hor beerta, maktabadda (oo sidoo kale loo yaqaan musqusha) ama sariirta, kiniinku waa WAXYAABAHA UGU FUDUD EE DHAXAN, iyo waxyaabo kale, ka baaraandeg webka, fiiri fiidiyoow oo xitaa u isticmaal sida koontarool fog si aad ugu shaqeyso laptop-keyga adigoon kicin.
Kiniin maxaa loogu talagalay? DHAMMAAN! Waxaa loo istcimaalaa dhamaan howlahaas yar yar ee aan qiil uhelaynin inuu yeesho bahalnimo sida laptop-ka, maanta waxaay kudhowaad taariikhi ah ku xigta kuwa udambeeya kuwasoo suura gal ah inay sifiican u gutaan doorka aan sheegay ee aan u isticmaalo kiniinka inkasta oo aanan oran karin ilaa mid ayaa gacanta ku haysay.
Dhinaca kale, qaabka sawirka ayaa aad uga raaxo badan in la maro shabakadda marka loo eego qaabka shaashadda muuqaalka.
Runtu waxay tahay in kaniinku ka mid yahay waxyaalaha ugu fiican ee hadda la soo saaray, waa kumbuyuutar yar, la qaadan karo oo xoog badan 😀
GUDAHA KA BAX:
Iyada oo ku xidhan shaqada mid kasta, kiniinku wuxuu leeyahay ISTICMAALO BADAN:
Haddii aad wariye tahay ama aad si joogto ah wax u qoroso, looma baahna in aad laptop-ka aad qaadato meel kasta, iyadoo aad haysatid kiniin badan.
Shirkad gudaheeda, hadaad kubixiso inta udhaxeysa shirarka ama aad macluumaad kuweydaarsato kooxo kaladuwan, kuma socon doontid laptop-kaaga. kiniiniga waad qaadaneysaa oo tagaysaa.
Meeshii uu ka shaqeynayey ilaa dhowaan mid ka mid ah milkiileyaashu waxay wateen kiniinkiisa meel kasta oo waxay u adeegsadeen inay si toos ah ugu soo bandhigaan alaabtayada iyo abaabul ahaan. In kasta oo mishiinkiisu yahay 13,3 ″ MBP, maaddaama uu haysto kiniin si dhib yar ayuu mishiinka ugala soo baxayaa xafiiska marka ay tahay inuu ka shaqeeyo meel ka baxsan la kulanka macaamiisha.
Dhammaan waxay kuxirantahay isticmaalka aad wax siineyso, wali waa qalab. Kahor intaanan 3G ku hayn taleefankayga gacanta iyo qaabkan ayaan meel fog ka geli karaa kombuyuutar kasta, anigoo meel walba jooga, markay i weydiistaan ​​taageero (ssh gaar ahaan).
Oo taxaddar, halkan dalkeyga iyo magaaladayda waa wax iska caadi ah in la helo Wi-Fi furan oo loo adeegsado dadka, waa wax laga xumaado in xaaladda nabadgelyo-darro ee aan ku nool nahay, ee caadiga u ah jamhuuriyadda mooska, ay kuu suurta gelin weydo adiga in loo isticmaalo qalab nuucaan ah bartamaha wadada, haddii ay xitaa dad waaweyn ku dhuftaan labada gacmood ee laga saari karo ama lagu dili karo labo kabood ...
Jamhuuriyadda muuska, haa mudane.
Caadi ahaan waxaan u isticmaalaa kiniin iyo taleefan casri ah maalin kasta, maadaama aan ku dhowaaday in aan iska daayo xisaabinta, inta badan maalinta ka dambeysa kormeerka (hadafkeygii ugu dambeeyay wuxuu ahaa gentoo) waxaanan naftayda u hibeeyay wax kale, sharci. Labada aaladoodba waa kuwo aad waxtar u leh, waxaan aqrin karaa boqolaal bog maalintii aniga oo aan indhahayga dhibayn oo aan dhibaato batteriya la kulmin, anigoo raadinaya bareeso iyo garabka oo iga xanuunaya inaan jiido buug yar (ama daraasiin buugaag qoran). Xagga kore waa mid caqli gal ah, cabbirka buugaagta yar, daboolkiisuna wuxuu u eg yahay ajande, weligay maan jeclayn fikradda ah in cholulear lagu qoro buug yar ama waxa ka sii daran, sawirro laga qaado iPad-ka 😛 si aan isu muujiyo. Runtii waan jeclahay suurtagalnimada iyo xorriyadda aan ku tijaabiyo android, in kastoo aan jeclaan lahaa barxad qalab furan oo OS lagu dooran karo. Kombiyuutarada kumbuyuutarradu way sii jiri doonaan sannado badan oo dheeri ah maaddaama aysan jirin wax isbarbardhigaya raaxada isticmaalka kumbuyuutarka iyo awoodda badan, fikradda ah "Post PC era" waa gebi ahaanba been abuur, ama in Apple ay xukumi doonto adduunka kombiyuutarka, oo ku yar waddankayga in calaamaddani ay u dhowdahay inaan la helin (iyo sidoo kale akhristayaasha elektaroonigga ah). Waxa la aqbali karo waxay noqon kartaa suurtagalnimada in dadweynaha bilaa aqoonta ah ay u haajiraan barnaamijyadan, maaddaama aysan macno samaynayn in la iibsado kombuyuutar lagu qoro farriin qoraal ah ama Facebook, waa qashin xoog iyo tamar in PC loo adeegsado waxyaabahaas fudud.
Waxaan u maleynayaa si aanan u qaadin culeys badan oo aan u awoodo inaan sameeyo waxyaabo AAD u aasaasi ah
Wax badan ayaan la yaabanahay haddii ay mudan tahay in mid la iibsado, laakiin xiisaha ugu weyn waa inaan helo si aan u badbaadiyo kumanaan kun oo PDF ah oo aanan ogeyn haddii ay ku habboon yihiin E-akhristaha in sidaas ayan ahayn sidaas ku badan Argentina
"AAD" aasaasiga ah!? Maxaad dooneysaa, soo uruur kernel (maxaa la qaban karaa)?
Ii sheeg wax "kakan" oo aadan ku sameyn karin softiweerka ku habboon ...
Kiniiniyada ayaan ku noolayn oo keliya macruufka iyo Android, sidoo kale waxaa jira Debian, Arch, openSUSE iyo hadda Ubuntu.
AAD aasaasi ah, fiiri adiga ...
Kiniiniga waxaad ku sameyn kartaa waxyaabo badan oo aan ahayn xD aasaasiga ah
Barnaamij wanaagsan oo loogu talagalay PDF waa iAnnotate PDF https://www.branchfire.com/iannotate/ xoogaa qaali ah laakiin waxaa jira Jailbreak 🙂
Haddana waxaan hayaa warqadaydii iyo qalinkeygii ... XD
Waxaan u maleynayaa in siyaasadda macaamilku aysan aniga igu habboonayn.
Waxaan u maleynayaa in siyaasada macaamiisha aysan igu habbooneyn. : wajiga:
Hagaag, waxaan helayaa ipad retina ah oo qaniinaysa gabadha, taasna uma qalanto, hahahaha
Ka taxaddar taas, archero!
Macallinkaygii hore, oo ah qof isticmaala Amiga iyo Apple markii dambe, ayaa ka cawday sida loo xiray, "loo xirayo" iPad-ka la barbardhigo Android, Plasma Active iyo kuwa kale ee beddelka ah (bilaash).
Wixii uu uga caban jiray iPad-kiisa 2 waxay ahayd asal ahaan inaadan khaldami karin macluumaadka ku jira aaladda sida aad rabto, had iyo jeer waa inaad ku sameysaa qaababka ay Apple soo jeedineyso taasina waxay kuu horseedaysaa inaad dareento inaadan iska laheyn. macluumaadka ku jira.
Qeybta farsamada, cayayaankaani waa kuwo cajiib ah: aad iyo aad u qurux badan banaanka, si fiican loo dhisay (ma ahan sida kiniiniyada badankood shirkadaha kale), oo leh shaashad leh midabbo cajiib ah, iwm. Marka laga hadlayo barnaamijka softiweerka ah, asal ahaan waa waxa Apple noo adeegsato: codsiyo wax ku ool ah oo raaxo leh oo loo isticmaalo - in kasta oo xoogaa ay ku xaddidan yihiin shaqooyinkooda -, qurux ahaan sooo qurux badan, oo leh nidaam hawlgal oo si habsami leh u shaqeeya ... runtii waa wax lagu farxo inaad isticmaasho iPad.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira qodobka yar ee aan kuu sheegayey: waxyar kadib markaad isticmaasho, haddii aadan ku laaban mashiinka Apple, waxaad dareemi doontaa inaad ku xiran tahay maaddaama fursadaha macluumaadka lala wadaagi karo qalab kale oo aan ahayn Apple ay aad u kooban yihiin - naqshad ahaan.
Intaas waxaa sii dheer, iPads-ka, oo ka duwan kiniiniyada kale badankood, ma kuu ogolaanayaan inaad ballaariso xusuusta gudaha, inta ka hartay kombiyuutaradaas ma jiraan wax dhibaato ah tan iyo markii aad isticmaali karto kaararka xusuusta ee aad rabto - marka lagu daro rakibidda distro, xididka Android ugu dambeeyay iwm
Waad ku mahadsantahay la-talintaada, waxaan horeyba u haystaa MacBook Pro iyo iPhone sidaa darteed waxaan aad u xiiseeyaa iPad-ka marka loo eego kan kale oo Android ah, haddii aan heli lahaa taleefanka Android waxaan aadi lahaa madax ilaa madax kiniiniga Android, salaan kadib
Hagaag, inaad isku dhexjirto inta udhaxeysa Tablet iyo Netbook waxaad raadineysaa Asus Transformer. Kiiboodhkaaga dekedda ah waxaan u maleynayaa inuu leeyahay dekedda RJ-45, USB iyo waxyaabo kale… Markaa sidaas uma xuma.
Taleefannada casriga ahi waxay kiniinnada ka dhigeen kuwo duugoobay, isku xirnaan wanaagsan, isu-socodsiin wanaagsan, awood aan dhammaad lahayn oo ay ku socodsiiyaan barnaamijyada, oh, oo waad wici kartaa telefoonka. Kiniiniyada waa kuwo aad u qabow, dhuuban oo qurux badan sidoo kalena ku raaxeysan in la isticmaalo (guriga) laakiin haddii kale si siman aan waxtar lahayn, in kasta oo ay faa'iido u leeyihiin akhriska, waxaan doorbidayaa buugaagta khadadka elektarooniga ah.
LOOGU TALAGALAY SHAQAALAHA
Waxaan u maleynayaa in sida haysashada buug, gaar ahaan dabool adag, aysan jirin wax loo siman yahay. Laakiin maqnaanshaha kheyraadka (tanna ma doonayo inaan ku dhiirrigeliyo burcad-badeednimada) Ma awoodi lahayn inaan awoodo dhammaan buugaagta aan akhriyay, sidoo kale waxaa jira faa'iido (ugu yaraan aniga ahaan) inaan haysto qaamuus ama halkii seddex (Larousse, Espasa Calpe iyo The RAE) oo aan ku helo kaliya adoo riixaya erayga su'aasha ah halka qeexitaannada, iskumid, antonym, tusaalooyin iwm lagu muujiyey dhammaantood goobta oo la adeegsanayo badhan kale ayaan ku soo celinayaa aqrinteyda. Mawqifka aqrisku maahan mid raaxo leh maxaa yeelay waxaa looqabtaa si lamid ah buug sidookale waxaan xambaari karaa dhowr aan aqrinaayo isla waqtigaas. Ugu dambeyntiina, sidoo kale waa taleefankayga, xisaabiyaha sayniska, IT-ga, iwm. marka aniga waxtar badan ayey ii tahay !!
Ku jawaab banndiido
Hagaag, aniga, qoraa ahaan, wali lama garanayo! hehehe, ardayga sharciga, shaqaale - ma ahan macallin- jaamacad iyo xiisaha aan toobad keeno Waxaan aqoonsanahay in:
-Waan iibsaday kiniin.
Looma isticmaalo wax soo saar, laakiin wax baa la cunaa.
-Waxa kale oo ay u adeegtaa inay ku weheliso waqtigaaga, si ay kaa saarto (ciribtirka cirro ama aanad gaboobin)
- waa sheyga ugu anfaca iyo lagama maarmaanka ah ee la malaysan karo.
-waa yaab iyo sixir.
Ku jawaab franplan
Mid baan hayaa laakiin waa mid gaabis ah
Saaxiibbada kiniiniga ahi waxay leeyihiin adeegsi shaki la'aan, tani waa; Markaad mid ka mid ah aaladahaas hadiyad ahaan u hesho, ku orod dukaanka kuugu dhow si aad wax uga iibsato una u iibiso. Waxaad arki doontaa sida halkaas aad ku ogaan doonto sida ay faa'iido u leeyihiin.
Ku jawaab raccoon
Kiniiniyadu waa wax aan ka badnayn beddelka xiga ee kontaroolada fog ee aan wada ognahay ... dheryahaas oo ay ka buuxaan badhanno daaraya TV-ga, raadiyaha, kafee sameeyaha iyo dabcan ... kuwa sidoo kale leh badhanka musqusha ka bixi markaad isticmaaleyso ... Kontaroolka fog ee aaladda otomaatiga ah wuxuu noqon doonaa kiniin ... waxaad kaliya ka eegeysaa meenuga shaqada aad rabto waana intaas ... kariyaha ayaa kuu diyaarinaya quraac adiga oo aan dheereynin. ..
si aan ugula faano ubuntu 13.04 oo aan ugu daawado filimada amaca
Ku jawaab kennedyperez
Shaqada Oskar dijo
Kiniinkayga 'Huawei Ideos S7' wuxuu ii ahaa aalad aad iigu wanaagsan. Adeegsiga ajendaha, makiinad-teeb mar mar makhaayadda, si loo muujiyo bandhigyo, maktabad caadi ah iyo la-talin deg deg ah oo xog ah oo ku saabsan internetka kulamada, iyo waliba qayb ka mid ah baashaalka dhageysiga muusikada ama daawashada fiidiyowyada.
Laakiin OjO, kiniin leh wifi keliya maahan adeegsi badan, maxaa yeelay had iyo jeer ma jiro xiriir la heli karo sidaa darteed waxay isticmaalaan keliya kalabar shaqooyinkeeda; haddii aad rabto inaad isticmaasho 100% Tablet, 3G ama 4G ayaa loo baahan yahay. Nasiib darro se Mexico "Carso-Apple" oo kaligiis ah ayaa IPAD ka dhigtay suuqa, maaddaama uu aad qaali u yahay waxay ku iibiyaan oo keliya WIFI iyo kiniiniyada kale ee noocyada kale sidaas baa lagu iibiyaa, haddii aad rabto mid 3G leh waa inaan weydii kuwa wax soo dajiya.
Waxaan u arkaa wax aad iyo aad u qosol badan oo layaab leh in shirarka, fikradayda yar ee Shiinaha ee S7 leh 3G iyo Android ay la wadaagaan internetka internetka iPad-kayga la shaqeeya ee ila shaqeeya
Qeyb kale oo qosol badan ayaa ah markay arkaan aniga oo ka hadlaya taleefanka 20 cm ...
Jawaab Oskar Chore
Kiniiniyada khadka tooska ah dijo
Kiniin ayaa loo isticmaalaa in lagu maro shabakadda, marka lagu daro, iyada oo loo marayo qalabkan moobiilka ah waxaad ka iibsan kartaa dukaamada internetka mana aha wax aad u adag in la maareeyo kaliya waa daaweynta la bixiyo.
Kajawaab kiniiniyada khadka tooska ah
i caawi waa hawl !!!
Ku jawaab michu
Aniga aragtidayda waa kuwo aan waxtar lahayn maxaa yeelay dirista iyo xaaladaha degdega ah ee kaladuwan durba waxaa jira smarfones heer sare ah. iyo in lagu shaqeeyo laptop-ka aan ka soo dejiyo xafiiska ilaa qolka fadhiga si aan u daawado TV-ga inta aan wax qorayo. Aniga aragtidayda waxay dhawaan u dhiman doonaan sida dinosaurs. By habka, ma jiraan wax ka sii seedy badan sida loo arko dhagaxa oo sawirro ka qaadaya dabeecadahaas.
Ku jawaab maruendi
Isku xirnaansho dijo
Mexico waxaan ku leeyahay barta iibinta nidaamyada barnaamijyada ganacsiga waxaanan u isticmaalaa kiniin si macaamiishaydu ay ugu fiicnaadaan habka ay u shaqeeyaan, tusaale ahaan, kiniin macmiilka makhaayada u tagi karo inuu qaato amarka, dukaanka dharka ee macaamiil kaniiniga ayaa si dhakhso leh u qaadan kara alaabada dhamaadka bisha oo qabsan kara kala duwanaanta, iwm.
Waa farxad in aaladaha 'raqiiska / Shiinaha' ay gacan ka geysan karaan in meherad si wanaagsan loo xakameeyo. Farxad!
Ku jawaab Conectiva
Sida loo ogaado dekedda furan ama isku xirnaanta uu aasaasay kombuyuutarkeennu
Maxaa ku cusub Libreoffice 4.0